Uyenza njani iakhawunti yaseNyakatho Melika yenethiwekhi yePlayStation | Iindaba zeGajethi
Uyenza njani iakhawunti yaseNyakatho Melika yenethiwekhi yePlayStation
Njengokuba uninzi lwenu lusazi, NetworkStation Network yinethiwekhi ethi, ukongeza ekuvumeleni umdlalo we-Intanethi kwii-consoles Isikhululo sokudlala, Ixhasa i-virtual bazaar ye Sony, PlayStation Ivenkile, apho sinokuzikhuphelela khona -kwaye kwezinye iimeko nditsho nokurenta- kumxholo weevidiyo okanye iinkonzo -inkcazo ephezulu yemiboniso bhanyabhanya, umculo, uthotho okanye ubhalise Umculo Unlimited-ukuthenga iindaba zomdlalo wevidiyo zamva nje kwifomathi yedijithali, ukhuphele ii-dlcs ezaziwayo okanye iidemo ezizodwa.
Nangona kunjalo, ukubonelelwa kunye namaxabiso uninzi lweziqulatho ezinikezelweyo PlayStation Ivenkile ziyahluka ngokweendlela zokurhweba onazo Sony Kwingingqi nganye. Ke, kulula kakhulu ukufumana umxholo othile kwifayile ye- PlayStation Ivenkile IYurophu ihlawulwa, ngelixa iqabane layo laseNyakatho Melika linokukhutshelwa ngaphandle kwendleko. Ukusukela Imidlalo yeVidiyo yeMunvi Sinikezela ngesifundo esilula esiza kuthi sikukhokele xa usenza iakhawunti NetworkStation Network oko kuyakuvumela ukuba ufikelele kwi-North American bazaar.
Kuqala, kufuneka sibe ne idilesi ye-imeyile ukuba siya kudibana nale akhawunti. Ungasebenzisa nabaphi na ababoneleli abaninzi abakhoyo, njenge-Outlook edumileyo- i-Hotmail endala-okanye i-Gmail.
Ukusuka kwikhonsoli yethu, siya kwicandelo labasebenzisi, apho siza kwenza khona into entsha.
Ngoku, siya kwimenyu ye NetworkStation Network kwaye siya kukhetha Bhalisela i-PlayStation Network.
Sikhetha Yenza iakhawunti entsha kwaye siya kufumana uthotho lwemiyalelo eskrinini, kulula kakhulu ukuyilandela, kwaye siya kuqhubeka nobhaliso.
Kuya kufuneka singene kwilizwe lethu lokuhlala ("indawo yokuhlala"), apho siza kukhetha khona eunited States (EUnited States), njengolwimi («ulwimi») siya kuphawula IsiNgesi (NgesiNgesi) kwaye ekugqibeleni siza kuyigqiba indawo eseleyo nomhla wokuzalwa kwethu ("umhla wokuzalwa"), ekucetyiswa ukuba ubengaphezulu kweminyaka engama-21 -kwamanye amazwe ase-USA, iminyaka esemthethweni yesininzi isuka kobu bungakanani -.
Siya kuyamkela imigaqo yenkonzo, umgaqo-nkqubo wabucala kunye nabanye ngokunika u-Yamkela (yamkela)
Kwinqaku elilandelayo, kuya kufuneka singenise idilesi ye-imeyile ebesifanele ukuba nayo ngaphambili, eya kuthi isebenze njenge Isazisi seseshoni (i-ID yokungena, idilesi ye-imeyile), a password yeakhawunti (iphasiwedi) kunye nefayile ye- umbuzo wokhuseleko (umbuzo wokhuseleko) oza kuhamba kunye nempendulo yakho (impendulo) Siyaqhubeka noQhubeka.
Siza kucelwa eyethu Isazisi esikwi-Intanethi, Igama lesidlaliso esilisebenzisayo ukudala umsebenzisi omtsha.
Sigcwalisa imihlaba yeGama lokuQala (igama), Ifani (nefani) kwaye, ukuba sinqwenela, isini (isini)
Kwinyathelo elilandelayo kuya kufuneka ufake idilesi efanelekileyo yaseNyakatho Melika, ebalulekileyo ekwenzeni iakhawunti. Nangona kunjalo, ungasebenzisa nayiphi na injini yokukhangela okanye iimephu zikaGoogle okanye uGoogle Earth ukufumana idilesi efanelekileyo. Nanku umzekelo:
Idilesi yesitalato 1: Nortwingh
Urhulumente / iPhondo: IFlorida
Ikhowudi yeposi: 34228
Kwinyathelo lokugqibela, siya kubuzwa malunga nokukhethwa kwezaziso nge-imeyile yokwazisa kunye nolwazi lwe Sony. Ukhetha ukhetho ocinga ukuba lulungile kwaye ucofe kuQhubeka.
Okokugqibela, siya kuba nescreen apho yonke idatha efakiweyo iya kuvela ngendlela eshwankathelweyo. Qinisekisa ukuba zichanekile kwaye zigqibe ukwenza iakhawunti ngokuQinisekisa.
Siyavuyisana nani, sele ninayo NetworkStation Network Mntla Merika!
Sicebisa ukuba ubhale phantsi, kwindawo ekhuselekileyo, yonke idatha yakho yokufikelela (Isazisi, i-imeyile, iphasiwedi, umbuzo wokhuseleko, impendulo, igama, umhla wokuzalwa kunye nedilesi) ukunqanda ukudideka okunokwenzeka kwixesha elizayo.
Ngoku kuza enye inqaku elinomdla lokucacisa: iindlela zokuhlawula. Idebhithi okanye ikhadi lekhredithi elikhutshwe eSpain aliyi kwamkelwa yinkqubo-uyakufumana impazamo. Isisombululo esisetyenziswa kakhulu ngabadlali kukubhenela ekuthengeni Amakhadi ePSN en Amazon.com, apho kuya kufuneka sibhalise nedilesi esemthethweni e-United States (le siyisebenzisayo ukwenza iakhawunti yaseNyakatho Melika PSN), faka iinkcukacha zetyala lethu / ikhadi letyala kwaye ufumane ikhadi Amakhadi ePSN, ezithengiswa ngokuzaliswa kwamaxabiso ahlukeneyo. Nje ukuba kuthengwe, ukuhanjiswa kuyidijithali, ke kuya kufuneka ube nekhowudi kwangoko ukuze ukwazi ukuyikhulula kwifayile ye- Ivenkile yePlayStation eMelika kwaye ungeze imali kwi-wallet yakho ebonakalayo (ngaphakathi PlayStation Ivenkile, kufuneka siye esiphelweni semenyu ngasekhohlo, khetha khupha ikhowudi ungene kuleyo usinike yona Amazon)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Uyenza njani iakhawunti yaseNyakatho Melika yenethiwekhi yePlayStation
yeison brea sitsho
Phendula i-yeison brea
UEivan Torres sitsho
Kwimeko apho ungahlali eSpain, ungayithenga njani imidlalo kwi-US PSN?
Phendula u-Eivan Torres
UJoseph rmz sitsho
Phendula kuJosseph rmz
Iakhawunti ye-imeyile nayo kufuneka isuka e-US?
Usebenza njani noMdiliya kwikhompyuter eqhelekileyo
Uyifaka njani nayiphi na ifonti yokubhaliweyo kwi-iOS nangaphandle kwejele